अनलाइन मार्केटिङबाट अपार ज्ञान साथमा आर्थिक लाभ पनि लिन सकिन्छ : – असोक कु. राई - Suman Rai Dot Com
नमस्कार म असोक कु. राई
यो संसारमा मानव भएर जन्मिए पछी जिवनलाई अगाडी वढाउँन मान्छेले विभिन्न पेशा, व्यवसाय रोजगार गर्नुपर्दछ । रोजगारको शिलशिलामा स्वदेश तथा विदेशका भोगाईले जुन सुकै पेशा या व्यवसायको लागि मार्केटिङ्गको अत्यन्तै ठूलो भुमिका हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भए तापनि यो अनलाइन मार्केटिङ्गबारे सुनेको मात्र थिए तर बुझेको थिइन । यो सम्बन्धि बुझ्न र जान्ने धेरै इच्छा भएता पनि कहाँ, कोसँग, कसरी गर्ने भन्ने कुराहरुमा धेरै दुविधाहरुमा थिए । सामाजिक संजालहरुमा दिन प्रतिदिन आउँने यस्ता विज्ञापनहरुले अनलाइन मार्केटिङ्ग सिक्ने,काम गर्ने मभित्रको ईच्छालाई अझ तिब्र बनाएको थियो । यही क्रममा सुमन राई सर र जितेन मुम्हो सरसँग मेरो सम्र्पक हुन पुग्यो । उहाँहरु धेरै अगाडीबाट अनलाइन मार्केटिङ्ग क्षेत्रमा काम गरी रहनु भएको, एकदमै अनुभवी भएको पाए । यस कारण उहाँहरुसँग आवद्द भएर काम सिक्ने र यही क्षेत्रमा काम गर्ने मेरो इच्छालाई सहर्ष स्वीकार गर्दिनु भएकोमा सुमन सर, जितेन सरलाई हृदयदेखि धन्यवाद अनि आभार व्यक्त गर्न चाहान्छु ।
यसरी मैले उहाँहरुसँग सिक्ने बुझ्ने अवसर प्राप्त गरेको छु र आजैबाट ईजि वान अप ट्रायल भर्सन टे«निङ्गको क्रममा इष्टेप १ बाट भिडियोहरु हेर्दै अनलाइन मार्केटिङ्गको बारेमा बुझ्दैछु । मलाई थाहा भयो कि, आफुसँग भएको फुसर्दको समय सदुपयोग मात्र हैन अपार ज्ञान साथमा आर्थिक लाभ पनि लिन सकिन्छ तर यसको लागि निरन्तर कडा मेहनत अनि बलियो इच्छा शक्ति आवश्यक हुनु पर्दो रहेछ।
इन्टर्नेटको माध्यमद्वरा दुवै फिजिकल र डिजिटल प्रोडक्ट बेच्न सकिन्छ ।
अनलाइन मार्केटरले कुनै पनि प्रोडक्टहरु सेल्स गर्नु पर्ने हुनाले, सबैभन्दा पहिला प्रोडक्टहरुको विषयमा गहन अध्ययन वा बढी भन्दा बढी जानकारी लिनु जरुरी हुन्छ । विशेष गरी अनलाइन मार्केटरले फिजिकल प्रोडक्ट र डिजिटल प्रोडक्ट सेल्स गर्नु पर्ने हुन्छ । भौतिक वा शारीरिक रुपमा प्रत्यक्ष छुन, हेर्न र प्रयोग गर्न सकिने जुन सुकै बस्तु वा सामान ईत्यादीलाई फिजिकल प्रोडक्ट भनिन्छ । जसलाई भौतिक शारीरिक रुपमा बनाईएको हुन्छ र यसलाई व्यवस्थित गरी राख्न ठाउँको आवश्यक्ता पर्नुका साथै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँहरु सार्नृु राख्न पनि खर्च लाग्ने गर्दछ । यसका अलाबा फिजिकल प्रोडक्टमा अन्य खर्चहरु पनि पर्न आउँछन् भने डिजिटल प्रोडक्टलाई भौतिक रुपमा छुन नसकिने तर त्यसलाई आवश्यक्ता अनुसार जति पनि सदुपयोग गर्न अथवा हेर्न सुन्न सकिने किसिमका प्रोडक्टहरुलाई डिजिटल प्रोडक्ट भनिन्छ । यसलाई व्यवस्थित गरेर राख्न न कुनै ठाउँ आवश्यक पर्छ न कुनै झन झटिलो नै हुन्छ । मात्र यस्ता डिजिटल प्रोडक्टहरु अन लाईन मार्फत सजिलै खरीद बिक्रि गर्न सकिन्छ।